पृथ्वी २० temperature२ मा तापमानको १. degrees डिग्री पार गर्न सक्दछ नेटवर्क मौसम विज्ञान
पृथ्वीको औसत तापमान अपेक्षित भन्दा १. degrees डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी पुग्न सक्छ: सन्‌ २०२1,5 सम्ममा, विश्वविद्यालयको एआरसी सेन्टर अफ एक्सीलेन्स फर क्लाइमेट सिस्टम साइन्सका वैज्ञानिकहरूले गरेको अध्ययनमा खुलासा गरिएको छ। मेलबोर्न (अष्ट्रेलिया) बाट, र »जियोफिजिकल रिसर्च लेटरहरू the पत्रिकामा प्रकाशित भयो।
यदि यो हुन्छ भने, यो किनभने प्यासिफिक दशमल Oscillation (आईपीओ), जो जलवायु को एक प्राकृतिक नियंत्रक हो, सकरात्मक वा तातो चरणमा जानुहोस्, ग्लोबल वार्मिंगको गति बढाउनुहोस्.
1 आईपीओ भनेको के हो?
2 के यो ग्लोबल वार्मिंगसँग सम्बन्धित छ?
आईपीओ सूचकांकको मासिक मान १ 1900 ०० देखि मे २०० 2006 सम्म।
छवि - मौसम प्रभाव समूह
यो एक छ वातावरण र समुद्र बीचको अन्तर्क्रियाको मौसम घटना जुन प्रशान्तको ralle०º उत्तर र º०º दक्षिण बीचको समानान्तरको बीचमा हुन्छ। यसका दुई चरणहरू छन्: सकारात्मक जुन उच्च तापक्रम दर्ता हुन्छ, र नकारात्मक। पहिलो सामान्यतया १ र years बर्ष बीच रहन्छ, जबकि दोस्रो 1० बर्ष वा सो भन्दा लामो हुन सक्छ।
के यो ग्लोबल वार्मिंगसँग सम्बन्धित छ?
हालसालैका वर्षहरूमा २०१ 2014 देखि २०१ from सम्म त्यहाँ तापक्रम रेकर्डहरू छन् जसले सुझाव दिन्छ कि अब जुन न्यानो चरण तपाई अहिले हुनुहुन्छ ती रेकर्ड गरिएको छ जुन रेकर्ड भइरहेको छ। अझै, बेन हेन्ली, एक अध्ययन को लेखक, कि भने यद्यपि यो नकरात्मक चरणमा छ, तिनीहरूको अनुसन्धानले देखाउँदछ कि १.º डिग्री सेन्टिग अवरोध २०२1,5 मा भाँचिने छ.
यसलाई रोक्नको लागि, »सरकारहरूले उत्सर्जन घटाउने मात्र नभई वातावरणबाट कार्बन हटाउने नीतिहरू पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछहेन्लेले औंल्याए।
यदि यो प्राप्त भएन भने, डन्डाहरू पग्लँदा स्तर बढ्न सक्छ, मरुभूमिहरू अधिक सुक्खा हुनेछन्, र दक्षिणपश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका र मेक्सिकोमा गम्भीर खडेरी भोग्नुपर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » २०२1,5 मा पृथ्वीले तापमानको १. 2026 डिग्री पार गर्न सक्दछ